पाँच रील र तीस paylines स्लट, लडाकू Thunderkick सफ्टवेयर द्वारा संचालित छ. यो स्लट बोनस खेल अत्यधिक मनोरंजक मेक्सिकन कुश्ती भेटी खेलाडीहरूलाई मनोरञ्जन भार प्रेरित छ.
Luchadora को विकासकर्ता बारेमा
यो स्लट बोनस खेल NYX संग सहयोग मा Thunderkick भनिन्छ जवान तर होनहार कम्पनी द्वारा विकसित गरिएको छ. यो कम्पनी द्वारा विकसित अनलाइन खेल रचनात्मक गेमप्लेको साथ वैविध्यपूर्ण विषयवस्तुहरू प्रस्ताव.
यो स्लट बोनस खेल चार पङ्क्ति, जो प्रत्येक रील मा चार प्रतीक हो भन्ने हो स्लट संग पाँच रील छ. Luchadora को तीस paylines तय गर्दै. खेल आफ्नो चार चिन्ह लगाइएको कुनामा र धेरै कुस्ती पोस्टर संग कुस्ती घन्टी मा सेट गरिएको छ यसको बारेमा strewn छन्. यो चिन्ह लगाइएको कुनामा बोनस सुविधाहरूमा एक प्रमुख भूमिका हुनेछ. यो स्लट बोनस खेल विभिन्न उपयुक्त उपकरणहरूमा प्रति स्पिन £ 100 को अधिकतम शर्त गर्न 10p को न्यूनतम शर्त देखि र माथि प्ले गर्न सकिँदैन. चार मास्क wrestlers एल Toro, Rayo, को साँप, र एल Pantera, साथै feisty र Eerie Campeon, को रील मा उच्च मूल्य प्रतीक हो. कम-मूल्य प्रतीक विभिन्न रंग मा खुर्सानी र खोर्सानी जस्तै केहि मूल मेक्सिकन तरकारी प्रतिनिधित्व गर्दै. यो स्लट बोनस खेल पनि दुई बोनस प्रतीक समावेश. तिनीहरूले Lucha Smackdown र LUCA बोनस प्रतीक द्वारा चित्रण गरिएको छ.
यो स्लट को विभिन्न सुविधाहरू छन्:
रिङ कुनो- नियमित कुनै पनि चिह्नित कुनामा कुनै पनि wrestler देखिन्छ भने खेल समयमा त सबै रील अन्य समान प्रतीक wilds मा परिवर्तन गरिनेछ. यो उच्च विजेता संयोजन गठन को राम्रो संभावना दिन्छ. को wilds सबै आधारभूत प्रतीक प्रतिस्थापन गर्नेछ.
कुस्ती Smackdown- नियमित खेल मा, मात्र रील यो प्रतिमा मुलुकमा5र पुरस्कार तपाईं 7, 11, or 15 निःशुल्क spins पनि गर्न 15x गुणक तपाईंलाई इनाम दिनुहुन्छ.
फ्री Spins लड्न- यो सुविधा लैंडिंग तीन वा बढी Lucha बोनस प्रतिमा द्वारा सुरु गरिएको छ. तपाईं प्राप्त 7, 11, and 15 अवतरण लागि निःशुल्क spins 3, 4, or5बोनस प्रतीक. यो सुविधा बेला घन्टी कुनामा सक्रिय. तिनीहरूलाई कुनै पनि कुनै पनि wrestler अवतरण सुविधा अवधिको लागि जंगली रहनेछ. सबै चार wrestlers wilds मा परिवर्तन थप लाभदायक प्रतिमा ला Luchadora सबै Misterioso Campeon प्रतीक को ठाउँ लिन बनाउँछ.
luchadora मात्र अचम्मको देखिन्छ र मनोरञ्जन को भार प्रदान गर्दछ शानदार स्लट छ तर पनि केही अत्यधिक इनामदायी बोनस सुविधाहरू समावेश.